नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनमा लतारिएका र त्यसले कांग्रेसलाई घाटा गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउनका लागि डा. शेखर कोइरालाले आफू निकट नेताहरूसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए ।
संवादमा महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, डा. चन्द्र भण्डारी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी लगायत रहेका थिए ।
कतिपय नेताहरू राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि काठमाडौं बाहिर रहेका र उनीहरू काठमाडौं फर्किएपछि थप छलफल गरेर आफ्नो समूहको धारणा बनाउने र पार्टी सभापतिसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको भर्चुअल संवादमा सहभागी नेता बलबहादुर केसीले बताए ।
निर्वाचनको सम्बन्धमा गठबन्धका नेताहरूले विभिन्न धारणा बाहिर ल्याएको तर कांग्रेसले निर्वाचनको सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा बनाउन नसकेको उनीहरूले औंल्याएका थिए ।
त्यसबाहेक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा नेताहरूले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका संवादमा सहभागी एक नेताले बताए ।
पार्टी सभापतिले राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीमा छलफल गर्न नचाहेको र केही सीमित मान्छेको भरमा परेको नेताहरूले छलफलमा बताएका थिए ।
त्यसैगरी, सरकारका कामबारे समेत पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै पार्टी सभापतिसँग गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष भर्चुअल संवादमा निकालिएको एक नेताले जानकारी दिए ।